Home Wararka Xildhibaannadii labaad oo tartan la’aan kusoo baxday Kursi ka tirsan Golaha Shacabka...
Xildhibaannadii labaad oo tartan la’aan kusoo baxday Kursi ka tirsan Golaha Shacabka (Kalsoonidii oo dhammaatay)
Kursigii saddexaad ee Doorashada Golaha Shacabka maanta ka socota magaalada Muqdisho ayaa goor dhoweyd soo idlaatay.
Doorashada kursiga tirsigiisu yahay HOP#210 ayaa waxaa isu soo sharxay Xildhibaan Faaduma Xasan Cali oo hore kursiga ugu fadhiday iyo musharax Hoodo Cabdi Xaashi, balse musharax Hoodo ayaa shaacisay inay tanaasushay.
Cod gacantaag kalsooni raadin ah oo loo qaaday Faadumo Xasan Cali ayaa waxay ergada oo ka koobab 101 ay kalsoon siiyeen, sidaasi oo ay mar kale ku noqotay xildhibaanad ka tirsan Baarlamaanka 11-aad iyadoo aan tartan gelin.
Ergada kalsoonida siisay xildhibaan Faadumo 91 ergo, waxaana ka aamusay 10 ergo, sidaasina waxaa lagu dhawaaqay natiijada ay kusoo baxday.
Tanaasulka iyo malxiiska kuraasta doorashada ayaa ku badan Doorashada Golaha shacabka oo la filayay in lagu loolamo.